Al-shabaab oo sheegatay in weeraro qorshesanaa ay ku dileen saraakiil mareykan ah iyo taliye Afgaduud
Isaga oo la hadlayay Idaacad ku hadasha afka Xoogagga al-shabaab ayaa Cali dheere, afhayeenka al-shabaab waxaa uu ka hadlay weeraro ka dhacay Puntland iyo koonfurta Soomaaliya oo lagu weeraray AMISOM iyo Sarkaal katirsanaa ladagaalanka argigaxisada ee dhinaca Galgala. Waxaa uu warkiisa ku sheegay in weerar gaadmo ah ay ku dileen Col. Jaamaca Saciida Warsame (Afgaduud)...
Mombaasa: Maxkamadda oo dhageysanaysa dacwadda dad ku eedeysan al-shabaab
Wararka ka imaanaya magaalada Mombaasa ayaa sheegaya in ciidamda Kenya ay xabsiga u taxaabeen laba qofood oo lala xiriirinayo in ay katirsanyihiin Xoogagga al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada ayaa xabsiga u taxaabey labada qof kaddib markii ay kua rkeen walxaha qarxa iyo bambaano ay ula socodaalayeen magaalada Mombasa wadanka Kenya waxaa sidoo kale la sheegay in dadka...
Ururka horumarinta Haweenka IIDA oo Miisas iyo Kuraas gaarsiiyay xarunta xanaanada gabdhaha agoonta “Sawirro”
Ururka Horumarinta Haweenka (IIDA) oo qalab ka kooban miisas iyo kuraas loogu talagalay inay wax ku bartaan gabdhaha agoonta ah ee ku jira xarunta xanaanada ee degmada Boondheere gaarsiisay. Qalabkaan maanta la gaarsiiyay Xarunta Daryeelka Gabdhaha Agoonta ah ee degmada Boondheere ayaa waxa ay isugu jiraan 30 miis iyo 30 kursi, kuwaasi oo midkiiba ay wax ku baran karaan...
Qarax miino oo ka dhacay Boosaaso iyo taliye ciidan oo ku dhintay
Qarax xooggan oo galabtan ka dhcay duleedka magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa sababay qasaaro isugu jira dhimasho iy dhaawac. Wararka ayaa sheegaya in weerarka oo ahaa miino dhulka lagu aasay duleedka Boosaaso lagula beegsaday Taliyihii ciidamada amaanka Puntland kaasi oo la socoday gaari la weeraray. Taliyihii ciidamda Darawishta Puntland ee dhinaca Galgala...
Banaadir oo Afhayeen cusub loo magacaabay
By Somalia focus Maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo sheegay in uu wado qorshayaal amaanka lagu xaqiijinayo iyo waxqabad dhameystiran ayaa maanta xilkii ka qaaday afhayeenka maamulka goboka. Wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab ayaa xilkii looga xayuubiyey afhayeenkii gobolka iyada oo mid cusub loo magacabay. Cabdibaasid Maxamed...
Howlgalo laga sameeyay buulo Burde iyo dad badan la soo qab qabtay
By Somalia focus Howlgalo lagu baarayo xaafadaha magaalada Buulo burde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa halkaasi ka fuliyay ciidamda dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhowaan la wareegay gacan ku heynta degmadaasi. wararku ayaa waxay sheegayaan in ciidamda is garabsanaya ay dad farabadan ku soo qab qabteen howlgaladooda iyada oo dadkaasi badankooda lala xiriirinayo in ay gacansaar...
Madaxweyne Xassan Sheekh oo cod dheer taageero kuweydiistay Caalamka
By Somalia focus Xilli dowladda ay caawiyaan ciidamada AMISOM ay dagaal adag kula jirto xoogagga al-shabaab ayaa madaxweynaha dowladda waxaa uu qoraal uu soo saarey codsi ku weydiistay beesha caalamka iyo saaxiibada taageera Soomaaliya. “Waxaannu wiiqeynaa awoodda cadowga anaga oo kasaarayna meelaha ay kataliyaan, wararka maalmahan na soo gaarayana waa kuwo cajiib...
Midnimo laga soo sheegay Baydhabo
By Somalia focus Kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada baydhabo oo ay goob joog ka ahaayeen xildhibaano, madaxda maamulka goonfurgalbeed Soomaaliya, Golaha guurtida maamulkaas, saraakiil goblka Bay ka socodey, aqoonyahano iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa lagu sheegey in la soo afjarey khilaaf siyaasadeed salka ku hayay dhismaha maamul loo dhanyahay oo katilaya deegaanada...
Mareykanka oo lacago dul dhigay saraakiil sar sare
By somalia focus Wasaarada Arrimaha Dibada ee dowladda Mareykanka ayaa markale lacago dul dhigtey saraakiil katirsan katirsan al-shabaab waxaana dowladdu ay sheegtey in ay bixineysi abaalmarin lacageed oo gaareysa saddex milyan oo doolarka Mareynaka dsarkaal kasta. Mareykanka ayaa raadinaya macluumaad la xiriira saraakiishan oo gacans aar la leh ururka argigaxisada ee...
Xoogagga al-shabaab oo jawaab soo daahdey ka bixiyey hadalkii dowladda Kenya
By somalia focus Afhayeenka Xoogagga al-shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya iyo ciidamada taageeraya ayaa muddo kaddib ka hadley hadal ka soo yeerey dowladda Kenya oo sheegayey in Ali Maxamuud Raage oo loo yaqaano Cali Dheere uu ku geeriyoodey duqeyn diyaaradeed oo ka dhacdey koonfurta Soomaaliya. Dowladda Kenya afhayeenkeeda Major Emmanuel Chirchir ayaa...